Oval Black Onyx Ring (Lacag) - Popular Jewelry
Oval Black Onyx Ring (Qalin)
Fargal qalin qalin ah oo lagu farsameeyay qaab oval ah oo olay ah oo madow wajigiisa dhexe.
Gemstone: Madow Onyx
Cabbirka Giraanta: 6.75 **
giraanta Dhererka: 24 mm
Ballaadhida Balaadhka: 20.5 mm
Si aad u hubiso helitaanka cabbirro iyo naqshado kale fadlan weydii emayl ama Instagram DM haddii loo baahdo.
** Cabbirka giraan lagu hagaajin karo ilaa kaabista 0.25. Nala soo xiriir kahor ama isla markiiba ka dib iibsashada giraan.
Faraanti Cajiib ah !!
Si sax ah ayuu u yimid! Mahadsanid !!